प्रधानमन्त्री भन्छन् : माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ? — Imandarmedia.com
११३ हजार ५१९ परीक्षण गर्दा ३ हजार १०६ जनामा कोरोना संक्रमण, थप २३ को मृत्यु
२भारतमा मध्यराति भ’यानक दु’र्घटना, १८ जनाको मृत्यु
३जसपा संसदीय दलको नेतामा कसले मार्दैछ बाजी , सबैलाई चकित पार्दै आयो यस्तो जानकारी
४अझै जसपामै छौँ भन्नु राजनीतिक बेइमानी – यस्तो छ महन्तको भित्रि चाल
५भूटानसँग नेपालको तुलना गर्दै मोदीले किन गरे यस्तो ट्वीट ? सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
६जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा प्रजिअकोे मनपरि ?
७उपेन्द्र यादवले सरकारमा जान खुट्टा उचालेपछि महन्थ ठाकुरले गरे झन् ठूलो तयारी
८१८ अर्ब रुपैयाँको ड्रग्ससहित समातिएका ओलम्पिक पदक विजेता खेलाडीलाई २५ वर्ष जेल
९प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारलाई चेतावनी एमसिसी सम्झौता सबै कागजात संसदमा पेस गर्न माग
१०नेपालको कुनै पनि शोरुममा नपाइने पूर्वयुवराज पारसले चढ्ने बाईकको मूल्य कति ? थाहा पाएपछि चकित पर्नुहुनेछ
११नेपाल प्रहरीलाई ठगि गर्ने ४ जना पक्राउ, प्रहरी नै तिनछक्क
१२बिसालु सर्पको बिगबिगी बढेपछि स्थानीय त्रसित
प्रधानमन्त्री भन्छन् : माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भनेर नेपालले झुटको खेती गरेको उनको आरोप छ ।
बालुवाटारमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल प्रचण्डको पुच्छार भएको टिप्पणी गर्दै आफूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको भनेर झुटको खेती गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसम खाएको बताए ।
ओलीले भने, ‘माधव नेपाल भोलि शेरबहादुर देउवाको पार्टी पनि ज्वाइन गर्न सक्छन् । प्रचण्डको पार्टी त ज्वाइन गर्नु नै छ । उनको गन्तव्य त्यही हो । माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको मामुली कार्यकता हुन् । तर, अहिले धाक लगाएका छन्, केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो । मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र कोही मान्छे नपाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्न ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई ‘लाजशरम पचेको मान्छे’को संज्ञा दिए ।
‘यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुँदा रहेछन् । आफ्नो सरकार ढाल्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने, विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हिँड्ने, अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भन्ने । यस्तो लाजशरम पचेको मान्छे ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।